တလောက ကျနော် သောမတ် ဖရီးမင်း (Thomas L. Freidman) ရေးတဲ့ "နောက်ကျတဲ့အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
အရှိန်မြှင့်တင် ပြောင်းလဲနေသောaခတ်တွင် အကောင်းမြင်သမားတဦး၏ လမ်းညွှန်" Friedman, Thomas L. (2016). THANK YOU FOR BEING LATE: An Optimist’s Guide to Thriving in the Age of Accelerations, New York: Farrar, Straus & Giroux. စာအုပ် မြည်းစမ်းဖတ်ကြည့်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ စိတ် ဝင်စားလာတာနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်တွေ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးချက်တွေကို လိုက်နားထောင်မိပါ တယ်။
ဖရီးမင်းကတော့ အဲသည်စာအုပ်မှာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့အရှိန်အဟုန်ပြင်းလှတဲ့ အပြောင်းအလဲ ၃-ခုကို ရှင်းပြပါ တယ်။ ဈေးကွက် (ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း)၊ မိခင် သဘာဝတရားကြီး (တနည်း ရာသီဥတု ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲလာခြင်း)နဲ့ မိုး ဥပဒေသ(Moore's law)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ၃-ခု ပြောင်းလဲလာပုံကလည်း အရှိန် အဟုန်ပြင်းစွာပြောင်းလဲလာနေပြီး၊ ကျနော်တို့နေထိုင်မှုဘဝတွေ၊ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကိုပါ ရိုက်ခတ် သက် ရောက်ပြောင်းလဲနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိစ္စ ၃-ခုလုံး အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ (exponential accleration) ပြောင်းလဲနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြောင်းလဲပုံကို သူက ကြယ်တာရာတွေပေါက်ကွဲပြီး အတောမသတ် စွမ်း အင်တွေလွှတ်ထုတ်နေတဲ့ ဆူပါနိုဗာ (Supernova) လို့ တင်စားပြောပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်ရပ်တွေက ကျနော် တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ပထဝီနိုင်ငံရေး၊ ကျင့်ဝတ်တရားများ၊ လုပ်ငန်းခွင် (workplace)၊ ရပ်ရွာလူမှု အသိုက် အဝန်း (community) အထိပါ သက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါပြီ။ ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ အနာဂတ်ပညာရေး အတွက်လည်း ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ရှိစေမှာပါလဲ။ ဆက်ပြီးတွေးမိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သောမတ်စ် ဖရီးမင်း အကြံပေးချက်တွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်တင်ပြထားပါတယ်။
တတိယ အချက်တော့ မူးစ် ဥပဒေဿ (Moore's law) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆယ်မီကွန်ဒတ်တာ (ချစ်ပ်) တွေ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ၁၈-လတိုင်းမှာ နှစ်ဆတိုးတက်လာနေပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကပိုသေးလာ၊ စွမ်းဆောင် ရည်ပိုကောင်းလာ၊ ဈေးချိုလာဖြစ်လာကြပါတယ်။ အရင်က ကွန်ပြူတာရဲ့အလုပ်တွေကို လက်တဝါးစာ ဖုန်းကလေးက လုပ်ဆောင်နေနိုင်ပါပြီ။ ဒီအချက်ဟာလည်း တော်လှန်ရေးသဖွယ် အပြောင်းအလဲပါ။
ဖရီးမင်း 'ကမ္ဘာပြားပြီ' (The World is Flat, 2004) ရေးတဲ့အချိန်က ကွန်ပြူတာ ကောင်းကောင်းအလုပ် ဖြစ်နေပါပြီ။ ပထမအချက်က ကိုယ်ရေးချင်တာကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံ ပြောင်းနိုင်တယ်။ အင်တာနက် ချိတ် ဆက်နိုင်တယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ကို ချိတ်ဆက်မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲယား တွေ (work-flow software) တွေ ပေါ် လာတယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေကို အင်တာနက်ပေါ်ရှာဖို့ Google ဂူးဂဲလ်လို ရှာဖွေစက်အင်ဂျင်(Search engine) တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေအားလုံးဟာ နောက်ပိုင်း အခမဲ့နီးပါး အားလုံး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက ဆင်းရဲသူ တွေ၊ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကို တစုံတရာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတော့ အပြောင်းအလဲရဲ့ 'ချက်မ'လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်လာတယ်။ အိုင်ဖုန်း ပေါ်လာတယ်။ သိုလှောင်မှုစနစ် (Cloud) ပေါ်လာတယ်။ ဖုန်းပေါ်သုံးတဲ့စနစ် (app) တွေ ပေါ် လာတယ်။ မြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ် (4G) လို ဟာတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ခုအခါ မြန်နှုန်းမြင့်- ပို သေးငယ်- ပိုလို့ လူတိုင်းထိတွေ့နိုင်တဲ့စနစ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဖုန်းဟာ ကွန်ပြူတာရဲ့လုပ်ငန်းအတော်များ များကို လုပ်ပေးနေပါပြီ။ ကျနော်တို့ မသိတဲ့ ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို (ဥပမာ- UBER နဲ့ တက္ကစီ ခေါ်သလိုမျိုး) 'One Touch' ခလုတ် တချက် နှိပ်ရုံနဲ့ လုပ်နိုင်သွားပါပြီ။ ဒီလိုခေတ်အခြေအနေက စား သုံးသူ (consumer) လုပ်ဖို့ သိပ်ကောင်းတယ်၊ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင် (entrepreneur) လုပ်ဖို့ သိပ် ကောင်းတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ ခေတ်က တဖက်သတ် ဆက်သွယ်ရေးစနစ် (One way communi- cation) စနစ် အဆုံးသတ်သွားပါပြီ။ (One-way communication is over.) [Facebook မှာ လူတိုင်းက တက် ဝေဖန်၊ နိုင်ငံရေး တက်ပြောနေတာကို ဥပမာပေးရမှာပါ]။ ပျမ်းမျှ သာမန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်လည်း ကုန်သွားပါပြီတဲ့။ (Average is over.) ကိုယ်က ပိုထူးချွန် ပိုကောင်းမှ ရပါတော့မယ်။ လခမြင့်- အလယ် အလတ်ကျွမ်းကျင်ဆိုတဲ့ခေတ်လည်းကုန်သွားပါပြီတဲ့။ (တော်ရုံကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အရင်ကအခြေအနေကောင်း တရပ်မှာ လခမြင့်မြင့်ယူထားကြတာလည်း ခေတ်ကုန်သွားပါပြီတဲ့။ (High-wage middle-skilled is over.)
အခုခေတ်မှာ လူတိုင်းက အိုင်တီ (IT) နည်းပညာကို အခြေခံတော့ 'အသုံးလုံး' သဖွယ်သိထားဖို့ လိုနေပါ ပြီ။ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေ ကွန်ပြူတာ၊ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ(IT) တီးမိခေါက်မိရှိကြပါရဲ့လား။
ပြောရရင် ကျနော်တို့ပညာရေးက အလွတ်ကျက်မှတ်မှုဘက် သန်ပါတယ်။ ဖရီးမင်း ဆွေးနွေးထားသလို ကျနော်တို့ပညာရေးက 'ဗဟုသုတ' ဖက်ကို ပိုများပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ကျက်စာတွေက နောက်တတန်း တက်ရင် မေ့သွားပြန်ပါတယ်။ သူ ဆွေးနွေးထားသလို (power) ပါဝါ၊ စီးပွားရေးစနစ် (Economy)၊ (Industry) လုပ်ငန်းကြီးများ၊ (workplace) လုပ်ငန်းခွင် ဘာမှချိတ်ဆက်မှုမရှိနေပါဘူး။ တခါ ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်း (skills) ကိုလည်း မပေးစွမ်းနိုင်ပါဘူး။ ခုလို အလွန်အမင်းဆက်သွယ်နေတဲ့ခေတ်ကြီး (hyper-connected world) အတွက်လည်း ဆက်သွယ်မှုက ရှိမနေပြန်ပါဘူး။
• Thomas L. Freidman's talk on "Globalization and Higher Education", https://www.youtube.com/watch?v=Xww6-KEBPTE
(Articles) Aung Thu Nyeen